SONY Bloggie Touch Camera : HD Video ရိုက်မလား…? Still Photo ရိုက်မလား…?
My Labels: pocket camcorder, review
အိတ်ကပ်ထဲမှာ ဆောင်ထားနိုင်တဲ့ HD Video ရိုက်နိုင်တဲ့ mobile phone ရွယ်အစား ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့ HD video ရော… 12.8-Megapixel ဓာတ်ပုံပါ ရိုက်နိုင်မယ့် SONY Bloggie Touch Camera အသစ်ကို ဆိုနီက ရောင်းချတော့မည်လို့ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်… SonyStyle.com မှာတော့ 10/09/2010 ဝန်းကျင်လောက်မှာ ဈေးကွက်ကို တင်ပို့မယ်လို့ ရေးထားပြီး pre-orders ကို လက်ခံနေပါပြီ…
Bloggie ပထမမျိုးဆက်အနေနဲ့ Bloggie camera PM5, CM5 model များကို SONY မှာ ထုတ်ခဲ့ဖူးပြီး ယခု ထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ မော်ဒယ်ကတော့ ယခင် မော်ဒယ်များထက် screen အရွယ်စား ပိုမို ကြီးလာကာ touch screen ဖြင့် ထုတ်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်… အလွယ်တကူ recording လုပ်ဖို့ခလုတ်တစ်ခု ပါဝင်ပြီး အခြား လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတော့ 3" touch screen မှတဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်…
ဒီ bloggie touch ကင်မရာဟာ 1/2.5 Exmor CMOS sensor အသုံးပြုထားကာ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရာမှာ Full HD video 1080p နဲ့ရိုက်ကူးပေးပြီး MP4 file format နဲ့သိမ်းဆည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်… built-in 8GB ပါဝင်တဲ့ ကင်မရာ မော်ဒယ်နဲ့ 1280x720/30p quality HD video ရိုက်ကူးမယ်ဆို ၄-နာရီ အထိ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်… HDMI (mini) output ပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရိုက်ကူး ထားသမျှကို HDMI cable အသုံးပြုပြီး HDTV တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ ကာ အလွယ်တကူ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်…
ပုံရိပ်တွေ ဝေဝါးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် SteadyShot image stabilization လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ Face Detection technology တွေလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်… အလိုအလျှောက် macro mode ကို ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ auto macro ပါဝင်ပြီး အဝေးက အရာဝတ္တုတွေ ဆွဲရိုက်နိုင်ဖို့အတွက် 4x Zoom ပါဝင်ပါတယ်…
အရွယ်အစားက 15 x 107 x 52 mm ဖြစ်ပြီး 4.5 ounces အလေးချိန် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်… ကွန်ပျူတာနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက် USB ခေါင်း တပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် ကင်မရာနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ဖို့ USB ကြိုးသယ်ရတဲ့ ဒုက္ခ၊ ပျောက်မှာ စိုးတဲ့ သောက ကင်းဝေးစေပါတယ်… ဒီ USB arm ကို ကွန်ပျူတာထဲကို ဓာတ်ပုံလွှဲ ပြောင်းဖို့နဲ့ ဓာတ်ခဲအားသွင်း ဖို့အတွက်ပါ အသုံးပြုပါတယ်… Camera ထဲမှာ Bloggie Software ver 1.0 တစ်ခါတည်း ထည့်သွင်းထားပြီး Windows XP SP3 (32-bit only), Vista SP1, Windows7OS တွေမှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ အလုပ်လုပ် ပါတယ်…
SonyStyle US website မှာတော့ SONY Bloggie Touch Camera 8GB ကို USD199.99 ဈေးဖွင့်ထားပြီး SONY Bloggie Touch Camera 4GB ကိုတော့ USD179.99 ဈေးဖွင့်ထားပါတယ်.. မြန်မာပြည်ကိုရောက်ရင်တော့ 8GB ကို အနိမ့်ဆုံး USD250 ဝန်းကျင် ဈေးရှိနိုင်ပါတယ်… အပျော်တမ်း ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစု သုံးဖို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်မြင်သမျှကို ပြန်share ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် အသုံးတည့်မယ့် ကင်မရာတစ်လုံး ဖြစ်ကြောင်း လတ်တို့ လိုက်ပါရစေ…
ဒါပေမယ့်… အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Apple iPod Touch 4Gen ဟာ 1280x720/30p HD video ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်လာပါတယ်… ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရာမှာ still photos (960 x 720) သာရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်… ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးတာကို ဦးစားမပေးဘူး၊ HD video ရိုက်မယ်၊ သီချင်း နားထောင်မယ်၊ ဗီဒီယိုကြည့်မယ်၊ ဂိမ်းကစား ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အဝယ်သင့်ဆုံးက Apple iPod Touch 4Gen ပါ… Apple iPod Touch 4Gen 8GB လည်း USD230 ဝန်းကျင် တန်ဖိုးရှိပါတယ်... ကဲ
ဒေါ်လာ ၂၃၀-ကျော်နဲ့ ညီမျှတဲ့ ငွေရှိရင် ခင်ဗျားဆို ဘာဝယ်မလဲ...
iPod Touch has wireless connectivity and can share the recorded movies directly online. Sony needs to beat it to be successful